Health Tips Archives - News 88 Post
December 16, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन लसुन खानुका १० फाइदा र ५ बेफाइदा
गाउँमै पाइने दूधे झारका यति धेरै चमत्कारिक फाइदा यस्ता ५ रोगको औषधि
December 15, 2021 N88LeaveaComment on गाउँमै पाइने दूधे झारका यति धेरै चमत्कारिक फाइदा यस्ता ५ रोगको औषधि
गाउँमै पाइने दूधे झार का यति धेरै चमत्कारी फाइदा सामान्य जरो देखि ठूलो रोग पनि हुन्छ निको । अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयुर्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन् । किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले बजारमा अहिले थुपै जडिबुटी औषधि पाइने गर्दछन। आज हामी तपाइलाई हाम्रो वरपर पाइने […]
गाँउमै पाइने टिमुर यति धेरै रोगका लागि रामबाण औषधि, निको पार्छ यति ठूला रोगहरू !
December 15, 2021 N88LeaveaComment on गाँउमै पाइने टिमुर यति धेरै रोगका लागि रामबाण औषधि, निको पार्छ यति ठूला रोगहरू !
प्रायः भान्सामा प्रयोग हुने टिमुरबारे सवै परिचित भए पनि यसमा पाइने औषधीय गुणका विषयमा जो कोहीलाई थाहा नहुन सक्छ । जाडो मौसममा टिमुरको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । यसले वाह्य तापमानसँग शरीरको सन्तुलन मिलाउन मदत गर्छ । साथै टिमुरले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ । टिमुर स्वादका लागि मात्र नभइ ओखतीको रुपमा समेत काम […]
December 8, 2021 N88LeaveaComment on पूर्व प्रेमी/प्रेमीकालाई भुल्ने १० तरिकाहरू !
काठमाडाैं । जब हामी प्रेममा हुन्छौं, त्यहाँ एक चरण हुन्छ जब हामी आफ्नो प्रेमीलाई पागल जस्तै माया गर्छौं। हामी उसको सम्मोहनमा छौं भन्न सक्छौं अथवा उसैमा मुग्ध हुन्छाैँ । एक दिन तपाईको प्रेमीले तपाईलाई छोड्दा के हुन्छ तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं उसलाई कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो जीवनमा फर्काउन चाहनुहुन्छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, यो […]
ब्रेकअप वा धोकाले तपाईंलाई मानसिक र भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउँछ
December 4, 2021 N88LeaveaComment on ब्रेकअप वा धोकाले तपाईंलाई मानसिक र भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउँछ
धोका वा ब्रेकअपले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। त्यसकारण प्रेम, वा मायामा धोका दिनुको अर्थ जीवन सकियो भन्ने होइन। मायामा अलविदा वा अलविदा कहिल्यै सजिलो हुँदैन। जब कसैले तिमीलाई माया गर्छ वा तिमीले कसैलाई माया गरेको बीचमा तिमी मध्ये कसैले कसैकाे दिल तोड्छ वा धोका दिन्छ, तब संसार उल्टो हुन थाल्छ। एउटा सम्बन्ध जसमा भावना र […]
December 4, 2021 N88LeaveaComment on सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने ? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने !
सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चारमा कमी आउँछ । अझ टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नुभयो भने यसले रक्तसञ्चारलाई अझ नियन्त्रित गर्छ, जुन दीर्घकालिन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन । रातो दाग बस्छदाग बस्छ ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नाले ब्राको इलास्टिक लाग्ने ठाउँको छाला रातो हुन्छ । गर्भवती अवस्था अथवा स्तनपान गराउने महिलाले भने खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । […]
महिनैपिच्छे रजस्वला किन हुन्छ ? 80% केटीहरूलाई कारण थाहा छैन !
December 4, 2021 December 4, 2021 N88LeaveaComment on महिनैपिच्छे रजस्वला किन हुन्छ ? 80% केटीहरूलाई कारण थाहा छैन !
चलचित्र, विज्ञापन र पसलहरूमा पिरियड भन्ने शब्द प्रचलित छ तर अझै पनि धेरै केटीहरूलाई महिनावारी वा महिनावारी के हो भन्ने थाहा छैन। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यसलाई रोगको रुपमा हेरिन्छ जुन गलत हो । अझै पनि पढेलेखेका संसारका धेरै कुरा जाने बुझेका मान्छेहरू पनि महिनावारी बारे खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । यहाँसम्म कि प्याड किन्न पनि […]
आजकल बिहे हुनेबित्तिकै मानिसहरूको सिधा प्रश्न यो हुन्छ कि घरमा सानो पाहुना कहिले आउँछ ? अक्सर मजाक मजाक मै साेधिने यस प्रश्नलाई कतिपय जोडीले गम्भीरताका साथ लिन्छन् त कसैले बेवास्ता गर्छन्, किनकी आजकल अधिकांश जोडीले मजेदार समय बिताउनका लागि पनि फेमिलि प्लानिङ गर्न समय लगाउँछन् । यस्तो अवस्थामा, जब तिनीहरू तयार हुन्छन्, तिनीहरू पहिले गर्भावस्थासँग […]